Maantana yaa is casumay? | allsanaag
Maantana yaa is casumay?
Madaxda Soomaaliyeed oo iyagu is casumaya iyo Caalamka oo caruurtii Soomaaliyeed u qaaraamaya.
Maalintii Jimcaha ee bisha afraad ahayd afar iyo tobanka ee sanadka 2017, oo inta badan caalamka reer galbeedku aan maalintaa la shaqo tegin, oo shaqooyinku fasax ahaayeen . ayaa waxaan nasiib u yeeshay in salaaddii Jimcaha aan kula tukado Umad Muslimiin ah Masaajidka Green Lane ee Birmingham ee dalka Ingiriiska.
Imaamkii khudbadda Jimacha jeedinayey maalintaas, inta badan khudbadiisa wuxuu ku soo qaatay abaarha ka jira guud ahaan Bariga Afrika iyo geeska Afrika. Waxayna ahayd mid umaddii dhegaysanaysay kaga qiiraysiisay. In badan oo ka mid ah dadkii khudbadda dhegaysanayey oo ay ishaydu qabanaysana waxay ahaayeen kuwo lacag ku ridayey sanbiilo masaajidka dhexdiisa dadka lacag qaaraan ah ee abaaraha looga ururinayey.
Salaadii Casar oo aan masaajidka ku soo laabtay, oo ahayd waqti qabow ah oo roob d’ayey, waxa taagnaa jidadka inta aan la soo soo gaarin Masaajidada Caruur ay d’adoodu yarayd, oo iyagu tagnaa wadooyinka dhinacyadooda oo weli wata sanbiiladdo oo lacag qaaraan ah u ururinaya dadka ay haraadka iyo gaajadu hayaan ee Bariga Africa.
Maalinta caruurta d’ada yari ee isugu jiray Asiyaan, Africaaan iyo Cadaan ay taagan yihiin dhaxanta iyo roobka ku dul d’aya, oo ay qaaraanka u ururinyaan umadda degan geeska Africa ee gaajada iyo haraadku hayo. Madaxdii Soomaaliyeed, gaar haan kuwii canshuurta iyo lacagta qaada iyagu waxay isku balansanayeen oo ay isku casumayeen Hotel City Palace ee magaalada Muqdisho. Iyaga oo ay ka guurtay xasuustii iyo in dalka ay ka jirto abaaro dad u dhimanayaan
Sidoo kale madaxda Federaalka iyo maamul goboleedyadu iyaguna casumaad aan joogto lahayn oo ay is casumayaan ayeey ku jiraan.
Ugu danbayntii waa nasiib xumo iyo garasho la’aan in caruurtii aduunka ay Sanbiilo ay lacag umadda Soomaaliyeed ugu ururinayaan ay la taagan yihiin Dariiqyada Caalamka .Halka madaxdii Soomaaliyeed ay iyagu ka badin l’ayihiin is casumaadooda iyo talafishanka oo laga arko inta neef oo Ari ah oo ay habeenkaas cuneen iyo fadhiga kuraasta waaweyn
← Waxaa noo dhiman inaan idin xasuuqno Dalalka Aduunka ugu amniga badan →